'हामी को हो चिन्छस् ?' भन्दै ट्राफिक धम्क्याउँने काँग्रेस साँसद् फन्दामा | Jukson
'हामी को हो चिन्छस् ?' भन्दै ट्राफिक धम्क्याउँने काँग्रेस साँसद् फन्दामा
काठमाण्डु, २ वैशाख
हामी को हो चिन्छस् ?’ बा ६५ प ९९१४ नम्बरको निलो पल्सर बाइकका चालक माइतीघरमा ट्राफिक प्रहरी जवान लक्ष्मी लामाथि खनिए । ती चालक त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् र लामाप्रति अझै आक्रमक बने, ‘बढी हुने होइन, जागिरसमेत खाइदिउँला ।’
चालक रोकिएका मात्रै के थिए, सोही मोटरसाइकलको पछाडि रहेकी महिला ट्राफिक प्रहरीलाई गाली गर्न तम्सिइन्, ‘म सांसद हुँ, सांसदलाई सडकमा रोक्ने त को होस् ? तब ट्राफिक जवान लामा निरीह देखिइन् । तर, अर्की ट्राफिक प्रहरीले लेन मिचेका ती चालकलाई रोकेर साँचो खोसिन् ।
मोटरसाइकलको पछाडि रहेकी महिलाले ट्राफिकको विरोध गर्दै तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त आर्याललाई फोन गरिन् ।
त्यसपछि महानिरीक्षक अर्यालले ट्राफिक महाशाखाबाट यसबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसबेला अपराहृन तीन बजिसकेको थियो । महाशाखाले लेन मिचेको अभियोगमा कागजात नियन्त्रणमा लिएको स्पष्ट पारेपछि अर्यालले ‘ल ठीकै छ’ भन्दै कारबाही अघि बढाउन संकेत गरे । केहीबेरमै भिड जम्मा भइसकेको थियो ।
ट्राफिक र जनपद प्रहरीका वाकिटकीमा पनि यसबारे खैलाबैला भइसकेको थियो । लेन मिच्ने चालकको लाइसेन्स हेर्दा थाहा भयो, ट्राफिक प्रहरीमाथि जाइलाग्ने सैनिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर सुजीतकुमार ठाकुर र नेपाली कांग्रेसकी सांसद रश्मी ठाकुर रहेछन् । उनीहरु नाताले श्रीमान् श्रीमती रहेको खुलेको छ ।
लेन अनुशासन उल्लंघन गर्दै माइतीघरबाट सैनिक मुख्यालय भद्रकालीतर्फको बाटो जान खोज्दा लामाले उनीहरुलाई रोकेकी थिइन् । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रकाश अर्यालले नियम मिच्ने जोसुकै भए पनि कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश
विएड प्रथम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित